Blockchain Observatory sy Forum mba hitondra EU ny "nitarika" ny Blockchain Tech - Blockchain News
Febroary 2, 2018 Admin
Blockchain Observatory sy Forum mba hitondra EU ny "nitarika" ny Blockchain Tech
EU nandefa Blockchain Observatory amin'ny Ethereum Startup
ConsenSys, iray amin'ireo malaza indrindra ao amin'ny ethereum startups tontolo iainana, no miasa amin'ny Vaomiera Eoropeana ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny Forum Blockchain Observatory, izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy Alakamisy.
Ary ny roa-taona no ezaka bola hatramin'ny 340 tapitrisa € ($425 tapitrisa) in blockchain tetikasa. Ny Vaomieran'ny voalohany nanambara ny dingana voalohany tamin'ny lohataona, fitanisàna ny faniriany hanitatra fahalalana ny blockchain rafitra sy nizara masiaka natao tamintsika teknolojia.
“Amin'ny maha-mpilalao sarimihetsika manan-danja eo amin'ny fiaraha-monina blockchain, ConsenSys hitondra mafy fanoloran-blockchain fampandrosoana, sy ny fifandraisana mafy orina fahaizany amin'ny tontolo iainana maneran-blockchain, ary ny fandraisana anjara amin'ny fomba mpandray anjara sy ny manam-pahaizana ao amin'ny Vondrona Eoropeana sy ny maneran-tany,” EC hoy ny alakamisy amin'ny fanambarana mampiseho ny fiaraha-miasa.
ConsenSys, manerantany “barotra famokarana Studio” miforona rindrambaiko voalohany indrindra ho an'ny ethereum blockchain, dia naorin'i Joseph Lubin, izay CoinDesk profiled noho ny Indrindra kery in Blockchain 2017 andian-dahatsoratra.
Anarana iombonana ifantohana
Ny Vaomieran'ny nanamafy ny fanambarana manokana ny faniriany mba hanetsika ny blockchain ho tombontsoan'ny ny tsena Eoropeana tokana, ary nanamarika fa ny tanjona voalohan'ny ny Observatory sy Forum dia ny hanorina manohy miaina tetikasa mba ho azo antoka izy ireo miasa manerana sisintany.
Misahana ny Toekarena sy ny Digital Society Mariya Gabriel hevitra:
“Hitako ny blockchain ho toy ny lalao changer ary tiako Eoropa mba ho lohalaharana ny fampandrosoana ny. Mila manampy ny zo hanorina tontolo iainana - ny Digital Single blockchain tsenam-barotra ho olom-pirenena rehetra mba handray soa, fa tsy iray, ampiasain'ireo hetsika. Ny Vondrona Eoropeana sy ny Forum Blockchain Observatory dia dingana manan-danja amin'izany lalana.”
Valdis Dombrovskis, ny EC filoha lefitra miandraikitra ny fahamarinan-toerana ara-bola, asa ara-bola sy ny Renivohitra Markets Union, amin'ny tetikasa hafa, izay aloha naneho hevitra momba ny Vondrona Eoropeana ny liana amin'ny teknolojia blockchain, Hoy ny Fanarahamaso koa hitarika EU policymaking.
Niarahaba ny hevitra hoe blockchain teknolojia, nanao hoe: “teo anivon 'ny maro izay mitondra fiara teknolojia dizitaly zava-baovao, blockchain manana ny mety ho tena manova ny asa ara-bola sy ny tsena.
Ahoana no blockchain hampivelatra ny teknolojia ao 2018?
Efa ho folo taona lasa izay ...
Previous Post:UPS raki-daza patanty hanaiky Bitcoin for fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana
Next Post:Double hamafa tarehimarika Fiondrehana Crypto Asset Market